lulu: မာရီယာရဲ့ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ဘိန်းမုန့်အောင်ပွဲ
မာရီယာရဲ့ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ဘိန်းမုန့်အောင်ပွဲ
at 5:56 PM Labels: မောင်နှမတို့ရဲ့ လက်ရာ
ချစ်သောမောင်နှမများအားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒီနေ့တော့ မောင်နှမထဲတွေက မာရီယာက ဘိန်းမုန့်လုပ်စားတာ အောင်မြင်သွားတဲ့အတွက် ပို့လာတဲ့ မေးလ်လေးကို မျှဝေပါရစေရှင်။ မာရီယာရဲ့ မေးလ်လေးထဲမှာ သူ့အတွေ့အကြုံတွေနဲ့ ဘိန်းမုန့်အတွက် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ကြိုးစားခဲ့ပုံလေးတွေကို ရေးပြထားပါတယ်နော်။ မာရီယာ့လက်ရာ ဘိန်းမုန့်လေးနဲ့ ရေနွေးကြမ်းလေးကို သုံးဆောင်ရင်း မာရီယာရဲ့ ၁၀၁ ကြိမ်မြောက် ဘိန်းမုန့်အောင်ပွဲလေးကို အားပေးဖတ်ရှုကြပါဦးနော်။
မလုလုရေ ဘိန်းမုန်.ကတော့ အောင်ပြီသွားပြီနော်။ အမပေးတဲ့ idea ကိုယူပြီးတော့ maria လုပ်တာပါနော်။ အမက ဆန်မှုန်.ကို ကျိူလို.ရတယ် လို. ပြောထားတော့ mariaလည်း ဘိန်းမုန်.ကိုပြန်လုပ်ဖို.ပြန်အားတက်သွားပါတယ်။ maria ဒီမှာလုပ်တာ လုံးဝကို မရတာပါ နော်။ နောက်မှ maria ဘယ်လိုလုပ်ရင် ဘိန်းမုန်.မဖြစ်တဲ့ အတွေ.အကြုံလေး ရေးပေးမယ် နော်။ အခုတော့ အောင်မြင်သွားတဲ့ ဘိန်းမုန်.အကြောင်းကို ရေးမယ်နော် အမ။
ပထမဦးဆုံး ချက်ပြီးသားထမင်းကိုနည်းနည်းယူပြီးကျိူလိုက်ပါတယ်။ maria မှာ ဘိန်းမုန်.မဖြစ်တဲ့ အတွေ.အကြုံရှိနေတော့ ဒီက ဆန်မှုန်.ကိုကျိုရင် အချဉ်မပေါက်မှာဆိုလို. ပါ။ maria ကတော့ ထမင်းကိုပဲသုံးလိုက်တာပါ။ ပြီးတော့မှ ဆန်မှုန်.နို.ဆီဘူးတစ်လုံးခွဲနဲ. ရောလိုက်ပါတယ်။ ထန်းညက်ရေ ထည့်ပါတယ်။ ဆားထည့်ပါတယ်။ နှပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ လုပ်ခါနီးမှ maria ကြက်ဥတစ်လုံးထည့်ပါတယ်။ မုန်.လုပ်မယ့်ဗန်းကို ထောပတ်အနည်းသုပ် ပါတယ်။မုန်.နှစ်ထည့်ပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အုန်းသီးကိုဖြူးပါတယ်။ ဘိန်းစေ့နဲ. မြေပဲစိမ်းကို ထည့်ပါတယ်။ မုန်.သားကို ပွလာရင်း သိသာပါတယ် အမ။ မုန်.သားမျက်နှာပြင် အပေါက် ကလေးတွေ ဖြစ်လာပါတယ်။ အောက်မျက်နှာပြင်သားရရင် မုန်.ကိုလှန်လိုက်ပါတယ်။ပြီးတော့ အပေါ်ကို နည်းနည်း အပူပေးပါတယ်။ အဆင်ပြေတယ်နော် အမ။ စားလို.လည်း ကောင်းပါတယ်။ မုန်.လည်းပွပါတယ်။ ဒါကတော့ maria ရဲ. အောင်မြင်သွားတဲ့ ဘ်ိန်းမုန်. လုပ်နည်းလေးပါ။
(1) ကြိမ်၊ ဆန်မှုန်.ကို ရေနဲ့ဖျော်တယ်။ ထန်းညက်နဲ.ရော ဆားထည့်။ ဆော်ဒါနဲ.ကြက်ဥ ထည့်ပါတယ်။ ဆားထည့်တာများလို.လားမသိဘူး၊ ငန်သွားတယ်။ 1နာရီနှပ်ထားတယ်နော် မဖြစ်ပါ။
(2) ကြိမ်၊ ပထမကြိမ်အချိူးကိုဘဲပြန်သုံးပါတယ်၊ နှပ်တဲ့ အချိန်ကို5နာရီထားပါတယ်၊ မဖြစ်ပါ။
(3) ကြိမ်၊ ဒီလောက်မဖြစ်တဲ့ ဘိန်းမုန်.ဆိုပြီးတော့ ဒီမှာတိုရှည် (ready make) အထုပ်ကို ၀ယ်ပြီး ထန်းညက်နဲ.ရောပါတယ်။ သူကလည်းဆန်မှုန်.ဆိုပြီးတော့လေ။ မဖြစ်ဘူး။
(4) ကြိမ်၊ ဆန်မှုန်.နဲ.ဂျူံမှုန်.ရောပါတယ်။ မဖြစ်ပါ။
(5) ကြိမ်၊ ဆန်မှုန်.ကို ပြောင်းဖူးမှုန်.နဲ.ရောပါတယ်။ မဖြစ်ပါ။
(6) ကြိ်မ်၊ ဒီလောက်မဖြစ်တဲ့ ဘိန်းမုန်.ဆိုပြီးတော့ ရန်ကုန်ကနည်းလိုပဲ ဆန်ကို ထမင်းကြမ်း နဲ့အတူစိမ်ပြီး တစ်ညသိပ်ပါတယ်။ food processor ကိုသုံးပြီးတော့ ရောကြိတ်ပါတယ်။ ဆန်မှုန်.တွေက အစေ့တွေဖြစ်နေပါတယ်။ အားမလျော့ပါဘူး ထန်းညက်ရေတွေနဲ. ရောပြီး လုပ်ပါတယ်။ မဖြစ်ပါ။
(7) ကြိမ်၊ pan cake အမှုန်.ကိုဝယ်ပြီးတော့ လုပ်ပါတယ်။ မုန်.က plant cake လုပ်ဖြစ်နေပါတယ်။ မုန်.ကို ညှပ်လိုက်ရင် မုန်.သား ဖွာပြီးတော့ ထွက်ပါတယ်၊ အဆင်မပြေပါ။ maria မကြိူက်ပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဆုတောင်းမိပါသည်၊ ကူညီမယ့်သူ ပေါ်လာပါစေဆိုတော့ maria ဆုတောင်းပြည့်ပါသည်။ မလုလု ရဲ. idea ကို သုံးလိုက်တော့ maria စိတ်တိုင်းကျ ဘိန်းမုန်. ရရှိသွားပါတယ်။
ယခုစာနဲ.အတူ မလုလုကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်မိပါတယ်။ maria ရဲ. 101 ကြိမ်မြောက် ဘိန်းမုန်.အောင်ပွဲပါ။ ဟီး ဟီး။
Shinlay August 6, 2010 at 7:11 PM
အားကျစရာပဲ လုပ်ကြည့်မာ်။ ကျေးဇူးပါ။
စန္ဒကူး August 7, 2010 at 5:57 AM
အခုထိပြန်မစမ်းရသေးဘူး maria နည်းနဲ့ထပ်စမ်းရမယ်
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) August 7, 2010 at 10:52 PM
ကွန်ဂရက်ကျူလေးရှင်းပါ မာရီယာ။ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်။မလုလုကိုရောပေါ့။နောက်များလည်း ဒီလိုရှားပါးပြီး လုပ်နည်းသိရခက်တဲ့မြန်မာ့အစားအစာလေးများကို စမ်းသပ်အောင်မြင်ဖော်ထုတ်တင်ပြနိုင်ကြပါစေဗျာ။
Thank you,maria and ama lu lu. I will try it.
Heartmuseum August 14, 2010 at 4:53 AM
သူ့ပုံတွေ ကြည့်ပြီး ဘိန်းမုန့်လွမ်းသွားပြီ။
ကိုယ့်အလှည့်ကျမှ ၂၀၂ ကြိမ်ဖြစ်နေရင်တော့ ဒုက္ခ..... :P
Anonymous August 14, 2010 at 1:11 PM
မွေးနေ. post မရောက်သေးလို..
ဒီမှာဘဲ wish လုပ်လိုက်ပါတယ်